Dyara Zvaburitsa Fekitori | China Dyara Inoburitsa Vagadziri uye Vatengesi
Natural yakasvibira-mavara, semi-translucent makristasi anounganidzwa kubva kuzvipenga mukati mehunde yemusviro unogara uri wakasvibira camphor miti inokura kusvika pamusoro pe 130 tsoka (40-50m). Miti iyi inoonekwa seyera nemaChinese uye inotipa chipo chekristaro resin yayo.
Yakachena kuchena 98% min Leaf Doro Doro cas 928-96-1 cis-3-Hexenol
Chemical Zita: Leaf Doro
Mashoko anoreva zvakafanana: cis-3-Hexenol
Molecular Fomula: C6H12O
Kuwandisa: 0.848 g / mL pa25 ° C (yakavhenekerwa.)
CAS Kwete.: 928-96-1
100% yakachena yakasikwa Beta pinene muhuwandu CAS 127-91-3
beta-Pinene (β-pinene) imvura isina ruvara, yakanyungudika mune doro,
asi kwete mvura.
Iine huni-girini-pini-kunge hwema. Izvo zvinoitika zvakasununguka murosemary,
parsley, dhiri, basil, yarrow, uye rose. Iyo zvakare iri nharaunda huru ye
hop kunhuwirira uye kuravira.
100% yakachena yakasikwa Alpha Pinene mune yakawanda CAS 7785-26-4
Alpha Pinene dextro akaparadzaniswa negamu turpentine mafuta
kana mamwe mafuta akakosha akapfuma muAlpha pinene, inonyanya kushandiswa
sekutanga zvinhu zvekubatanidza terpineol,
camphor, dihydromyrcenol, borneol, sandenol uye terpene resin.
Alpha Pinene dextro HOP iri kutsvaga kushandiswa muopical inoshanda yemishonga yepakati, kuchengetedza mbesa uye hwema makemikari maindasitiri.
Chemical Zita: Carvacrol
Chitarisiko: isina ruvara kune yakajeka yeyero mvura
Yakakwira mhando yehunyoro Tristyrylphenol ethoxylates CAS 99734-09-5 nemutengo wakanaka
Yakakwira mhando yemvura Tristyrylphenol ethoxylates CAS 99734-09-5 nemutengo wakanaka Chigadzirwa: Chemical Chemazita: Tristyrylphenol ethoxylates Molecular Fomula: C30H24O. (C2H4O) n CAS: 99734-09-5 Zvikumbiro: Iyo isiri-ionic inogadzira inoshanda zvakanyanya mune agrochemicals. Apex 25kg / dhiramu kana 200kg / dhiramu, kana maererano nezvaidiwa wako. Inofanirwa kuchengetwa munzvimbo yakaoma, inotonhorera uye isina mhepo, dzivisa kusagadzikana uye hunyoro, chengetedza iri kure nemagidhi oxide ITEM INDEX Hunhu Pale yeyero l ...
100% yakachena uye yakasikwa Geranyl butanoate cas 106-29-6
100% yakachena uye yakasikwa Geranyl butanoate cas 106-29-6 Product details: Chemical Name: Geranyl butanoate CAS 106-29-6 Applications: Organic intermediates, Spices Packaging: Packed in drums, net weight 25kg, 50kg, 175kg ITEM INDEX Appearance Colorless kune rakachenuruka yero mvura Inonhuwira inotapira ine muchero Wemukati (GC) )97% Yakananga Gravity @ 25 ℃ 0.890 ~ ​​0.898 Refractive Index @ 20 ℃ 1.455 ~ 1.460 * Pamusoro pezvo: Iyo kambani inogona kutsvagiridza nekugadzira chigadzirwa chitsva ...
100% yakachena uye yakasikwa L-menthyl Acetate cas 2623-23-6 nemutengo wakanaka
100% yakachena uye yakasikwa L-menthyl Acetate cas 2623-23-6 nemutengo wakanaka Chigadzirwa ruzivo: Kemikari Zita: L-menthyl Acetate Mazwi anoreva: cis-1,3, trans-1,4-menthol acetate Molecular Formula: C12H22O2 Molecular Weight : 198.3 CAS No.: 89-48-5 Einecs No.: 201-911-8 Zvishandiso: Inoshandiswa se spice yekunhuhwirira mints, michero, michero, nezvimwewo, inoshandiswa mukudya uye zvinwiwa. Inoshandiswa muzvizoro, mvura yemuchimbuzi, inoshandiswawo musipo; Iyo inogona zvakare kugadzirwa muEastental flavour uye macitrus flavour. Packaging: Yakarongedzwa mu d ...
chemakemikari giredhi echisikigo uye yakachena Borneol / D-borneol 96%
Chigadzirwa Chigadzirwa: Natural Borneol
Dyara Chikamu: Natural borneol mashizha
ExtractionMethod: Steam distillation
Mafuta eTung, anozivikanwawo seChina Wood Oiri, mafuta eLumbang, Noix d'abrasin (fr.) Kana mafuta ehuni chete, anogadzirwa nembeu dzemuti weTung muti (Aleurites fordii uye Aleurites montana, mhuri Euphorbiaceae).